कतार सरकारले बढायो नेपाली कामदारको तलव, अब कसको कति हुन्छ ? – Nep Stok
कतार सरकारले बढायो नेपाली कामदारको तलव, अब कसको कति हुन्छ ?
पुष ९, २०७८ शुक्रबार 176
महामारीको समयमा विदेशी श्रमिकलाई काम तथा आम्दानीमा कमी नहोस् भनेर कतार सरकारले अनलाइनमार्फत जागिर परिवर्तन गर्न सकिने गरी अनलाइन वेब पोर्टल तयार गरेको छ ।
Prevकतारबाट आयो नसोचेको खवर ! नेपालीहरु खुसीले गदगद
Nextटिकटकले जित्यो गुगललाई, गुगलभन्दा पनि लोकप्रिय बन्यो टिकटक
मान्छे मा’रेर २८ बर्षदेखि फरार व्यक्ति घरभित्र डोकोमा लुकेको अवस्थामा पक्राउ